Loza tany Antsirabe :: Zaza, 12 taona, maty nofaohin’ny fiara • AoRaha
Loza tany Antsirabe Zaza, 12 taona, maty nofaohin’ny fiara
Maty tsy tra-drano vokatry ny dona mafy nahazo azy sy ny fahaverezan-dra be loatra ny zazalahikely iray, 12 taona, nodonin’ny fiara teo amin’ny tetezan’i Sahatsiho Antsirabe, afak’omaly tolakandro, tokony ho tamin’ny 4 ora.
Raha ny fanazavana voaray dia samy nizotra avy any avaratra ka hihazo an’iny lalana mankany Vatofotsy hiditra an’Antsirabe iny ilay zaza, izay nitondra bisikileta, sy ilay fiara « Mercedes Sprinter » avy any Antananarivo. Nison-gona ny fiara teo alohany ity fiara mpitatitra olona ity rehefa tonga teo amin’ny tetezan’i Sahatsiho ka tao anatin’izany no nahavoadona an’ilay zazalahikely.
Nipitika lavitra izy sy ny bisikiletany. Tapaka ny tanany sady vaky ny lohany. Tsy tana ny ainy na dia niezaka namonjy aza ireo nanatri-maso ny loza.
Nanampy trotraka ny voina ny nataon’ireo fiara nandalo teny an-toerana, izay nitazam-potsiny ny fahavoazan’ilay zaza ka tsy nisy mba hitondra an’ilay niharam-pahavoazana teny amin’ny hôpitaly. Ny polisy tonga nizaha ny loza no nandray an-tanana nitondra ny razana teny amin’ny tranom-patin’ny hôpitaly Atsimo.
Fepetra eto Analamanga Halevina eny Anjanahary ireo razana tsy afaka mivoaka ny faritra
Vono olona tany Andapa :: Tovovavy, 16 taona, hita faty voatsindron’antsy